PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - ZIZOQINA EZOKUPHEPHA E-ARTIZEN
ZIZOQINA EZOKUPHEPHA E-ARTIZEN
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Ezikaqedisizungu - LUCKY CAIN lucky.cain@ilanganews.co.za
KUZOQINISWA ezokuphepha endaweni yobumnandi ekwamashu, i-artizen Lounge, kulandela isiminyaminya esisuke emcimbini wangesonto eledlule. Indaba yokuqiniswa kwezokuphepha ivezwe ngumnikazi wale ndawo usiphiwe Mcanyana.
Lesi siminyaminya siphoqe ukuba abanye abantu bagcine bengangenanga kulo mcimbi wedistruction Boyz ebigubha impumelelo yayo njengoba i-albhamu yayo idayise yafinyelela kwigolide.
Umcanyana uthi ubone kufanele ukuba ashintshe ukwenza ngemuva kwalo mcimbi ukuze kugwemeke okwenzeke ngesonto eledlule nokungaholela ekulimaleni kwabantu.
“Sizoqinisekisa ukuthi ezokuphepha ziseqhulwini ngoba sifuna uma abantu beze e-artizen bangazitholi behlukumezeka nanoma yingaluphi uhlobo. Sibonile ukubaluleka kokugcina isibalo saba- ntu singeqi kwesifanelekile,” kusho umcanyana.
“Akubona abantu bakwamashu kuphela abeza e-artizen kodwa baqhamuka ezindaweni ezahlukene, ngakho kumele baphatheke kahle ngaso sonke isikhathi,” kusho umcanyana.
Lo somabhizinisi ukhuluma kanjena nje mhla zizine kunhlolanja (February) kuzoba nomunye umcimbi omkhulu kule ndawo lapho kuzokwe kwethulwa ngokusemthethweni ubudlelwano phakathi kweqembu lebhola likanobhutshuzwayo Amazulu FC nesikhondlakhondla somsakazo Ukhozi FM.
Kulo mcimbi kuzobe kuboshelwe abaculi nodj abanohlonze, phakathi kwabo okubalwa UDJ Tira, DJ Sox, Tipcee, Duncan, Distruction Boyz, Khuzani, DJ Bongz, Dladla Mshunqisi, DJ Nzwiri, DJ Cndo, DJ Mngadi, Mondli Ngcobo, DJ 15, DJ Oros nabanye.
Umcanyana uthembisa ukuthi kulo mcimbi nakanjani abantu bazophepha. Mayelana namahlebezi athi usezinhlelweni zokuyinweba indawo yakhe udalule ukuthi okwamanje akukho angakusho ngaphandle kokuthi usazoxoxisana nomakhelwane bakhe kuqala ngaphambi kokuthatha isinqumo ngalokho. I-artizen Lounge ibalwa nezinye zezindawo zobumnandi ezihamba phambili Kwamashu namaphethelo.